Sida loogu sahlo wada sheekaysiga farriimaha lumaya ee Calaamadaha | Androidsis
Sida loogu sahlo wada sheekaysiga farriimaha lumaya ee Signal
Macaamiisha farriinta farriimaha waa mid ka mid ah ka-faa'iideystayaasha waaweyn oo ay weheliso Telegram baahinta weyn ee isticmaaleyaasha ee WhatsApp ay haysatay usbuucii la soo dhaafay. Calaamadda ayaa koray 4.300% tirada soo dejinta oo kaliya gaaraan 50 milyan oo soo degsasho ah tan iyo markii la bilaabay illaa iyo hadda.
Signal sida dhibic xoog leh waxay leedahay asturnaan, oo ah wax dadka isticmaala WhatsApp ay lumiyeen ayna sii waayi doonaan laga bilaabo 8da Febraayo. Taas wuxuu ku darayaa ikhtiyaar xiiso leh sida inuu awood u yeesho wada sheekaysiga farriimaha lumaya waqtiga cayiman ee aan dul dhignay.
Muddada waqtiga waxay u dhaxeysaa hal saac ilaa usbuuc, inta udhaxeysa waxaa jira fursado kale oo nus saac ah, 1 saac ilaa usbuuca aan soo sheegnay. Tani waxay lamid tahay farriimaha iskood u baabiiya WhatsApp iyo in la heli karay mudo wanaagsan.
Signal wuxuu noqonayaa barnaamij ku kori doona boodbood iyo soohdin ka dib markii dad badani ay qaadaan tallaabada ay uga tagayaan waxa ka mid ah aaladaha farriinta loo isticmaalo, WhatsApp. Signal wuxuu ku dhashay horumariyeyaasha WhatsApp, in kasta oo xilligan asturnaanta ay tahay barta ugu adag ee codsigan.
Si aad ugu suurtageliso wada sheekaysiga farriimaha lumaya ee Signal waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Fur wadahadalka xiriir kasta oo liiskaaga ah
Dhagsii liiska saddexda dhibic oo xulo "Fariimaha lawaayo"
Hadda dooro muddada farriimaha, tan ugu habboon waxay noqon kartaa hal toddobaad, laakiin tani waxay kugu xirnaan doontaa adiga, waxay noqon kartaa 5 daqiiqo illaa toddobaad, maraya waqtiyo kale oo ka yar ama ka dheer
Saxeex marka aad calaamadeyso oo aad dirto farriin ayaa bilaabi doonta in la gooyo waqtigaas oo waxaad arki doontaa sida loo tirtiro iyada oo aan loo baahnayn in gacanta lagu sameeyo. Isticmaaluhu waa midka aakhirka go'aamiya waxa laga yeelayo farriimahaas, maaddaama oo la ilaaliyo ay ka dhigayaan kuwo ammaan ah marka ay u dirayaan mid ka mid ah dadka aad la xiriirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu sahlo wada sheekaysiga farriimaha lumaya ee Signal
Oppo A93 5G waa nooc cusub oo soo gal ah oo leh Snapdragon 480 iyo 90 Hz panel
Xiaomi hadda wuxuu ku jiraa liiska "shirkadaha xaddidan" ee Mareykanka